Kooxaha Juventus & Ajax Oo Barbaro Galay, Cristiano Ronaldo Oo Shabaqa Soo Taabtay Iyo Kulanka Turin Oo Si Buuxda Loogu Kala Bixi Doono. - GOOL24.NET
Kooxaha Juventus & Ajax Oo Barbaro Galay, Cristiano Ronaldo Oo Shabaqa Soo Taabtay Iyo Kulanka Turin Oo Si Buuxda Loogu Kala Bixi Doono.
April 10, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxaha Ajax iyo Juventus ayaa barbaro 1-1 ah ku kala baxay kulankii lugtii kowaad ee siddeed dhamaadka UEFA Champions league. Gool uu Cristiano Ronaldo dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta ayuu isla bilawgii qaybtii labaad kansalay xidiga kooxda Ajax ee David Neres.
Inkasta oo ay Juventus hal gool oo marti ah soo dhalisay haddana waxay awoodi wayday in ay guul soo gaadho iyada oo Ajax iska lumisay fursado badan oo ay guul ku gaadhi kartay laakiin Ajax oo hore kulankii lugtii hore ee 16ka guuldaro kala kulantay Real Madrid balse kulankii Bernabeu ku soo baxay ayaa Turin iskeeni doonta iyada oo natiijo aan xumayn haysata.
Ajax iyo Juventus ayaa qaybtii hore ee ciyaarta soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah kaas oo ahaa mid weerar iyo weerar celis xoogan ku dhisnaa laakiin kooxda Ajax ayaa muujisay sida ayna xili ciyaareedkan uga cabsanayn koox kasta oo wayn oo Yurub ah waxayna qaybtii hore heleen fursado cajiib ahaa.
Laakiin Ajax ayaa qaybtii hore awoodi wayday in ay awoodii badnayd iyo fursad abuuristii ay heshay ku dhaliso wax goolal ah waxayna taasi fursad fiican siisay Juventus oo shaqo adag qabtay si ay Ajax u joojiso.
Daqiiqadii 45 aad ee dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta Cristiano Ronaldo ayaa qalad xun oo ay difaaca Ajax sameeyeen si xun ugu ciqaabay kadib markii uu darbo madax duulaysa uu ku dhaliyay goolka muhiimada wayn u lahaa kooxdiisa Juventus wuxuuna caawin qurux badan ka helay João Cancelo.
Cristiano Ronaldo oo ah xidiga ugu saamaynta badan wareegyada bug baxa UEFA Champions League ayaa saamayntiisa sii watay wuxuuna Ronaldo ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Old Lady hogaanka kaga qabtay kooxda Ajax oo fursado dahabi ah iska qasaarisay.
Wax walba oo ay Ajax qaybtii hore samaysay waxay ku fashilmeen in ay wax gool ah ku dhaliyaan waxaana si buuxda ugu ciqaabay Cristiano Ronaldo waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 1-0 ay Juventus hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Ajax soo laabtay iyada oo qaab ciyaareed waali ah ku jirta waxayna markiiba duufaan ku abuurtay goolka iyo difaaca Juventus iyada oo hamigoodu ahaa in ay ciyaarta ku soo laabtaan.
Daqiiqadii 46 aad Ajax ayaa isla markiiba gool cajiib ah ciyaarta ugu soo laabtay kadib markii uu David Neres kubbad qurux badan ku dhaqaajiyay shabaqa Juventus wuxuuna ahaa gool xamaasada ciyaarta mid waali ah u badalay waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa noqotay mid si wayn ay labada kooxood ugu dagaalameen laakiin Ajax ayaa dhibato wayn ku qabtay in ay fursado tiro badan qasaarisay.
Waxaa laysla soo gaadhay ilaa dhamaadkii ciyaarta iyada oo ayna kooxni dhalin goolka labaad laakiin daqiiqadii 85 aad Costa ayaa ugu dhawaaday in uu Juventus u keeno goolka labaad laakiin birta ayaa gookan ka beenisay.
Laakiin ugu danbayn ciyaarta ayaa ugu danbayn ku dhamaatay barbaro 1-1 ah iyada oo Juventus in yar oo faa’iido ah ku haysata in ay gool marti ah soo dhalisay laakiin kulanka Turin ayaa noqon doona mid si xoogan loogu dagaalami doono isla markaana si rasmi loogu soo bixi doono afar dhamaadka UCL.